Izibonakaliso Zevidiyo Ezihlasimulisayo - Izidlakela ze-Ellicott
Amavidiyo we-Dredge Dredge
I-Cutterhead Dredge animation
I-Ellicott® ama-cutterhead dredges zitholakala ngobukhulu obuhlukahlukene nobunzulu bokumba. Umklamo wabo osindayo uqinisekisa isikhathi eside somkhiqizo kanye nembuyiselo ephezulu ekutshalweni.
Ellicott's Swinging Dragon® imigodi ilungele olwandles, izindlela ezinamanzi amancane, namaphrojekthi wokubuyiselwa kwamaxhaphozi. Amawele ethu okugwedla alula ukusebenziseka, kusebenza kahle, futhi kuthuthwa iloli elilodwa.
Ukuphathwa Kwamathuluzi Okudonswayo
Kukhona izinketho eziningi zokuphatha ezibonakalayo ezitholakalayo zokulahla izinto ezibunjiwe. Izinketho ezinjalo zifaka amaMechanical Dewatering Systems for sediments, Dredge Material Placement Sites to contain pumped materials, Open Discharge systems for pumping materials directly on the sea, and Dewatering Tubes to keep solid.
Ama-Inred Dredging kanye Nemachweba nge-Ellicott Dragon® Dredge
I-Ellicott Dragon® Dredges iyasiza ku- ukusula izimbobo namachweba. Ukunqwabelana kwesihlabathi kungavimba ngokuphelele iziteshi kusuka esikebheni sezikebhe. I-Ellicott Dragon® Dredge ingasetshenziselwa ukusula iziteshi zokungena. Ngemuva kokumiswa kwesiteshi, izikebhe zingahamba ngokuphepha.
Izinzuzo ze-Hydraulic Dredging for Izicelo Zokumbiwa
Ukwehliswa kwe-Hydraulic kunezinzuzo eziningi ngaphezulu kokumbiwa kwemishini. Isibonelo, ukwakhiwa kwe-hydraulic kunikeza ithuba lokunciphisa abasebenzi, amandla amancane nokukhishwa, izindleko ezimbalwa zemali, nezindleko eziphansi zokulungisa. Futhi, ukudonswa kwe-hydraulic kuvumela ukudluliswa okuqondile kuye endaweni okucutshungulwa kuyo, okunciphisa ukubuyiselwa kwezinto kabusha.
I-Spud Carriers animation
Ukwengezwa kohlelo lwezinqola ze-spud kwandisa inani eliphelele le-swing yokusebenza kwe-dredge futhi kuthuthukise ukukhiqizwa okuphelele kwe-dredge ngokuvumela opharetha ukuthi enze intuthuko eminingi ngaphambi kokubeka kabusha i-spud esebenzayo. Izinqola zethu ze-spud ezenziwe ngezifiso zingahlanganiswa nanoma yimaphi ama-dredges ethu.